कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा पूर्ण डिजिटल एक्स-रे सेवा शुरू - खबरम्यागजिन
कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा पूर्ण डिजिटल एक्स-रे सेवा शुरू
कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्स-रे युनिटको आज उद्घाटन गरिएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले नदियाको एउटा सरकारी कार्यक्रमबाट रिमोटद्वारा उक्त डिजिटल एक्स-रे युनिटको उद्घाटन गरेपछि यता जिल्लापाल डा. विश्वनाथले रिबन काटेर उक्त डिजिटल एक्स-रे युनिटको उद्घाटन गरेका थिए।
एसकाज सञ्जीवनी प्राइभेट लिमिएटेडद्वारा सञ्चालित आधुनिक तक्निकी युक्त उक्त डिजिटल एक्स-रे युनिट पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभागको सहयोगितामा निर्माण गरिएको हो। लगभग2करोड 33लाखको लागतमा निर्माण गरिएको एक्त डिजिटल एक्स-रे युनिटको उद्घाटन पछि कालेबुङ जिल्लाका बिरामीहरूले अबउसो नि:शुल्क डिजिटल एक्सरे सेवा पाउने भएका छन्।
कालेबुङ सरकारी अस्पतालमा उपचाराधीन बिरामीहरूले कुनै पनि डिजिटल एक्स-रे गर्न परे अन्यत्र जानपर्ने अवस्था रहेको थियो। अब उसो कुनै पनि बिरामीहरू डिजिटल एक्स-रे गर्नका निम्ति अन्यत्र धाउनपर्ने आवश्यक्ता नपर्ने भएको छ। उत्तर बङ्गालभरीमा नै पहिलोपल्ट आधुनिक तक्निकी युक्त उक्त डिजिटल एक्स-रे युनिटको उद्घाटनपछि कालेबुङको जनताले निशुल्क सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध भएको जिल्लापाल डा. विश्वनाथले बताएका छन्।
यस अवसरमा रोगी कल्याण समितिका अध्यक्ष शिखा राई, जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अङ्कन सिमलाङ्दी, उप जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी डा. एस लियो आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यता रोगी कल्याण समितिकी अध्याक्ष शिखा राईले पनि जिल्लावासीले डिजिटल एक्स-रे युनिटको उद्घाटन पछि धेरै सुविधा पाउने बताएकी छन्।